पहिराेले थुनियो बुढीगंगा, तराई डुबानमा - VON TV
Wednesday December 11, 2019 |
पहिराेले थुनियो बुढीगंगा, तराई डुबानमा
२७ असार २०७६, शुक्रबार १७:३७ 123 ??? ???????
बाजुरामा लगातारको वर्षाले बुढीगंगा नदीमा पहिरो खस्दा ताल बनेकाे छ । पहिरोले नदी थुनिएपछि पैमाको बस्ती जोखिममा परेको छ। नदी थुनिँदै गएपछि बुढीगंगा नगरपालिका-१ अम्कोट र बल्देको बस्ती सार्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।
जोखिम बढेपछि नेपाली सेना र प्रहरीलाई त्यसतर्फ खटाइएको छ। नदी थुनिएको खतरासँगै नजिकै रहेको खेतीयोग्य जमिन, झोलुङ्गे पुल र साँफे मार्तडी सडकखण्ड उच्च जोखिममा परेका छन्। नदी थुनिएकाले अछाम जिल्लामा पनि उच्च सर्तकता अपनाइएको छ। साँफेबगरका स्थानीय पनि त्रसित बनेका छन्। थुनिएको नदी जतिबेला पनि फुट्न सक्ने भएकाले स्थानीयमा त्रास बढेको छ ।
डुबानले ३५ घरपरिवार विस्थापित:
त्रिबेणी नगरपालिका वडा नं ९ पैंमाको पहिरो खस्ने क्रम जारी छ । पहिरोकै कारण बूढीगंगा नदी थुनिँदै गएपछि ताल बनेको हाे । निरन्तर झरी परेका कारण पहाड खस्ने क्रम जारी रहेको स्थानीयले बताएका छन्।
निरन्तरको वर्षाका कारण हरिनगर गाउपालिका–५ वसन्तपुरस्थित सुकसेना टोलका ३५ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। उनीहरुलाई प्रहरीले उद्धार गरेर स्थानीय विद्यालयमा सुरक्षित राखेको छ। सुकसेना टोलमा घुँडाघुँडासम्म पानी जमेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डिएसपी ज्ञानेन्द्र फुयालले जानकारी दिए।
भारी वर्षा जारी रहेकाले सो क्षेत्रमा थप उद्धारमा कठिनाइ हुनसक्ने उनले बताए। केही दिन पहिले सो स्थानमा नयाँबाटो निर्माण गर्दा पानीको निकास नभएर बस्ती डुबानमा परेको बताइएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष एवं वडाध्यक्षहरुसँग समन्वय गरेर पानीलाई निकास दिने प्रयास गरिरहे पनि भारी वर्षाले कठिनाइ भएको फुयालले बताए।
काेशी अञ्चल अस्पताल डुबानमा:
लगातारका वर्षाका कारण विराटनगरका अधिकांश क्षेत्र जलमग्न भएका छन् । कोशी अञ्चल अस्पताल डुबेको छ। सडकको पानी अस्पतालभित्र पस्दा औषधि पसलसहितका प्रशासनिक भवनसमेत प्रभावित बनेका छन् । विराटनगरको दक्षिणी क्षेत्रका केही बस्तीमा पानीको सतह बढेपछि डुबानमा छन् भने बजार क्षेत्रमा पनि पानी जमेको छ ।
ढलको निकास नगरी सडक उच्च बनाइदिँदा अस्पतालभित्र पानी पसेको हो । अस्पतालमा उपचार गराउन आएका सेवाग्राहीलाई समेत समस्या भएको छ। प्रदेश–१ को सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालका रूपमा रहेको कोशी अस्पतालमा दैनिक १ हजारभन्दा बढी सेवाग्राही उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।
देशभर मनसुनी वर्षा भाेलि पनि
जल तथा मौसम पूर्वानमान महाशाखाले गएरातिबाट मुलुभर भारी वर्षा भएको जनाएको छ । देशभर मनसुनी वर्षा जारी रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सचेत गराएको छ ।
गएरातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशभरका नदीहरुमा जलको वहाव बढेका छ । पहाडी क्षेत्रहरुमा पहिरोको जोखिम बढ्ने भएकोले उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ । महाशाखाले आज दिनभर देशका अधिकांश भू-भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र पानी पर्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
देशका पश्चिमी भूभागका केही स्थानहरु र मध्य र पूर्वका धेरै स्थानहरुमा वर्षा हुनुको साथै देशका थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षा र एक दुई स्थानहरुमा अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । आज राति देशका अधिकांश भू(भागमा पूर्ण बदली रहनेछ। देशका पश्चिमी भूभागका केही स्थानहरु र मध्य र पूर्वका धेरै स्थानहरुमा वर्षा हुनुको साथै थोरै स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । छ ।
त्यसैगरी महाशाखाले शनिबार भोलि देशका अधिकांश भू-भागमा बदली रहने जनाएको छ। देशका धेरै स्थानहरुमा वर्षा हुनुको साथै एक दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । शनिबार राति पनि देशका पश्चिमी भूभागमा सामान्य बदली तथा पूर्वी र मध्यका अधिकांश भूभागमा पूर्ण बदली रहनेछ। देशका धेरै स्थानहरुमा वर्षा हुनुको साथै एक दुई स्थानहरुमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पुनः अस्पताल भर्ना
कोहलपुरमा विद्यार्थीमाथि प्रहरीले चलायो सय राउन्ड गोली
गोली हान्ने र कर्फ्‍यु लगाउने गरि के के भयो कोहलपुरमा ?
१ नम्बर घुस्याहामा इन्जिनियरहरु !
स्कूले बालबालिकालाई प्रहरीले निर्मम कुट्यो , मुस्कान प्रहरीको निर्दयीपनको पराकाष्ठा
वैदेशिक रोजगारीमा मानव तस्करीको बिगबिगी,प्रहरी र विभागवीच खटपट !
चितवन मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरुले लगाए ताला !
खेलकुदको बजेटमा लुट, मन्त्रीसहित ४० लाई दौरा–सुरुवाल सुट
प्रहरीको जागिर छाडेर लोकल कुखुरा पाल्दै पुर्व लडाकु अनिता
विश्वको तापक्रम वृद्धिमा ह्रास -ओजोन तह भरिदै
आमाको ममताः खेल्दाखेल्दै बच्चालाई दूध खुवाइन् यी खेलाडीले
निर्मला हत्या प्रकरण : हत्याराको नजिक पुगेको प्रहरीको दाबी !
ट्रम्पकी छोरीको बेलायती जासुससँग हिमचिम
ट्रम्पमाथि दुई बुँदे महाभियोगको तयारी
नयाँ घर सर्न र नयाँ काम गर्न बुधबार रोज्नुहोस्
पोर्चुगलमा एक नेपालीको दु:खद निधन, अन्तिम श्रद्दान्जली बुधवार !
सागमा ५१ स्वर्ण : जसले नेपाललाई स्वर्ण पदक दिलाए !
सागको समापनमा गौरिकाले बोकिन् नेपालको झण्डा